Tusaya - Androidsis | Androidsis (Bogga 2)
Heerka kobaca ee Disney + wuxuu sii wadaa lama joojin karo wuxuuna horeyba ugujiraa 95 milyan guryo aduunka oo dhan ah.
Spotify oo qarka u saaran inay gaarto 350 milyan oo isticmaale bishii
Tirada macaamiisha ee Spotify waa 155 milyan oo macaamiil ah, in kasta oo ay sii wadato inay aragto khasaare.
Spotify waxay sare u qaadeysaa qiimaha qorshaha qoyska hal euro
Shirkadda Spotify ayaa ku dhawaaqday qiimo koror ku yimid qorshaha qoyska, kor u kaca hal euro ah oo gaari kara inta ka hartay qorshayaasha.
Google wuxuu badalaa qorshayaasha mustaqbalka ee Stadia
Google waxay badashaa istiraatiijiyadeeda Google Stadia waxayna diirada saari doontaa inay bixiso cinwaano dhinac saddexaad ah halkii ay kaheli laheyd.
Galaxy S21-kan cusub waxaa shahaado siiyay shirkadda Netflix si ay ugu ciyaaraan waxyaabaha ku jira HDR
Goobaha ugu dambeeya ee ay Netflix xaqiijisay inay ku raaxeysato waxyaabaha ku jira HDR waa Galaxy S21, TCL 20 G iyo Oppo Reno 4 Pro
Adeegga fiidiyowga ee loo yaqaan 'Paramount + streaming streaming' wuxuu imaan doonaa Latin America Maarso 4
Adeegga cusub ee fiidiyoowga ah ee soo gaaraya Latin America waa Paramount +, waa adeeg imaan doona 4-ta Maarso.
Sida loo beddelo dejimaha isticmaalka xogta Netflix
Haddii aad ku isticmaasho Netflix aaladdaada moobaylka ah, waxaan ku baraynaa sida looga kaydiyo xogta hawlwadeenkaaga. Cashar aasaasi ah oo muhiim u ah adeegga.
Shirkadda Disney ayaa ku dhawaaqday inay sare u qaadi doonto qiimaha adeegyadeeda fiidiyowga ee kala baxa ah 2 euro laga bilaabo Febraayo 2021
Spotify ayaa kuu ogolaan doonta inaad ku ciyaarto heesaha ku keydsan qalabkaaga
Cusbooneysiinta soo socota ee Spotify ayaa noo oggolaan doonta inaan u isticmaalno codsi ahaan ciyaaryahan ahaan muusikada ku keydsan aaladdayada.
10ka fiidiyow ee muusikada loogu ciyaaro YouTube Spain 2020
Maqaalkeygii hore, waxaan ku tusay kuwaas oo ah 10-ka fiidiyow ee leh tirada ugu badan ee aragtiyada inta lagu jiro 2020-ka ...
Sheekooyinka warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale ka dhigi kara Spotify
Adeegga qulqulka muusikada Spotify ayaa bilaabay tijaabinta Sheekooyinka qaabka ugu nadiifsan ee Instagram, Facebook, iyo inbadan.
GeForce Haddaba socodka ciyaarta wuxuu ku shaqeyn doonaa barnaamijka biraawsarka Chrome
NVIDIA barnaamijka dariiqa ciyaarta ee daruuraha ayaa sheegaya inay ku shaqeyneyso nooc ka mid ah barnaamijka Chrome-ka
'Casa del Flamenco' waa goobta cusub ee Spotify loogu talagalay muusikada magaalooyinka, heesaha dheddigga ah iyo kuwa loo dhan yahay iyo waxyaabo kale oo dheeri ah
Meel aan caadi ahayn oo ku taal Spotify oo aan ka heli karno 11 liiska-soo-saarka ee ugu caansan ama avant-garde flamenco.
Hal sano ka dib markii la bilaabay, Disney + waxay leedahay saldhig adeegsade ka badan 70 milyan oo macaamiil ah iyada oo aan la tirin Latin America.
Qiimaha Disney Plus ee Latin America
Bishii Nofeembar 17, Disney + waxay imaan doontaa Latin America si ay u sii haysato dadka isticmaala, waxay billowday dalab bilaw ah oo noo oggolaanaya inaan keydinno 4 lacag bixin bille ah
Xiaomi Mi Pai: Waa sheeko Chromecast ah oo aan u baahnayn xiriir internet
Xiaomi waxay ku dhawaaqday Mi Pai, aalad u eg clone Chromecast oo aan u baahnayn qadka internetka. Dhamaan faahfaahinta halkan.
Youtube loogu talagalay Android waxaa lagu cusbooneysiiyay naqshad cusub oo ku saabsan taranka iyo tilmaam cusub
Soo ogow waa maxay tilmaanta cusub ee aad ku isticmaali karto YouTube-ka cusub oo aad ku dhex dari doonto maalinba maalinta ka dambeysa mobilkaaga.
Chromecast cusub wuxuu ku darayaa kontoroolka fog
Jiilka 4-aad ee Chromecast wuxuu isku daraa laba astaamood oo cusub oo muhiim ah: kontoroolka fog iyo Google TV oo ah nidaamka hawlgalka.
Spotify wuxuu bilaabayaa Podcast cusub oo si gaar ah loogu talagalay Patria, taxanaha TV-ga
Laba cutub ayaa lagu sii daayaa Podcast-ga Patria ee isbahaysiga Spotify iyo HBO Spain si loo raaco horudhaca taxanaha TV-ga.
Waqti ay kula kulmaan fanaaniinta cusub ee maxalliga ah ee 'Radar' xarunta 'Spotify' iyo 14-ka liistada ay ku qoran yihiin
10 farshaxan yahano Isbaanish ah ayaa ku kulmay xarunta loo yaqaan 'Spotify Radar hub', oo ah meel ku dhex jirta barnaamijka si ay ula kulmaan farshaxanno muusiko cusub
Adeeg muusig oo hoorto ah oo HD ka socda Amazon. Iskuday si bilaash ah 90 maalmood
Amazon waxay noo ogolaaneysaa inaan isku dayno adeeggeeda cusub ee hi-fi socodka muusikada bilaash 90 maalmood
'Waxyaabaha aan ugu jeclahay weligood' waa tan cusub ee Spotify si loogu wadaago heesaha aad jeceshahay iyo boodhadhka
Marka laga reebo inaad dooran karto 5 heesood oo aad jeceshahay "Waxyaabaha aan ku jeclahay weligood", waxaad sidoo kale dooran kartaa XNUMX barnaamijyada 'Spotify podcasts'.
Spotify waxaa lagu cusbooneysiin doonaa qaabka Karaoke, fadhiyada kooxda, dib u ciyaarista khadka tooska ah ee isticmaalayaasha bilaashka ah iyo inbadan
Waxaan ka feejigan nahay dhammaan wararka naga sugaya barnaamijkeenna muusikada ee aan ugu jecelahay: Spotify.
Nooca bilaashka ah ee Netflix ayaa hadda laga heli karaa Spain, iyada oo ay ku kooban tahay waxyaabaha ku jira taxanaha iyo filimada labadaba.
Kuwani waa heesaha ugu badan ee la dhageysto iyo boodhadhka xagaaga ee Spotify
Farshaxanada Isbaanishka iyo kuwa caalamiga ah ayaa isu taga xagaagan iyagoo wata malaayiin tarmo ah oo ku jira barnaamijka 'Spotify'. Ha moogaanin Podcasts.
Disney + waxay imaan doontaa Latin America bisha Nofeembar 17
17-ka Nofeembar, adeegga fiidiyowga ee qulqulka Disney ayaa si rasmi ah uga degi doona Latin America.
Disney + waxay gaaraysaa 57 milyan oo macaamiil waxayna ku dhawaaqeysaa imaatinkeeda Latin America
Disney waxay ku dhawaaqday in adeegiisa fiidiyoowga ah uu imaan doono Latin America bisha Nofeembar ee sanadkan, iyada oo aan la cayimin maalin cayiman.
Apple Music ee loogu talagalay Android waxay ku dareysaa taageerada dib-u-hagaajinta bilaa cillad la'aanta ah
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee barnaamijka Apple Music ee loogu talagalay Android, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto heesaha adoo tirtiraya hakadka dhexdooda ah.
Kuwani waa heesaha ugu dhawaaqista badan xagaagan sida uu qabo Spotify
In aysan jirin heeso muusiko ah oo lagu dhaqaajiyo meydadkaas heesaha kuwooda ugu badan xagaagan ka dhawaajin doona sida uu qabo Spotify ayaa na ogeysiin doonta.
Spotify wuxuu dhammeeyaa 10.000 xadka heesta
Spotify waa maanta, oo laga yaabee sanadaha soo socda, adeegga ugu caansan ee muusikada ...
Ku raaxayso Amazon Music Unlimited muddo 3 bilood ah bilaash
Muddo 3 bilood ah waxaan ku raaxeysan karnaa adeegga muusigga ee qulqulaya ee Amazon gebi ahaanba bilaash
Netflix waxay bilaabaysaa inay ka saarto xayiraadaha ay saartay Yurub intii lagu jiray aafada
Netflix waxay xaqiijisay inay bilowday inay ka saarto xayiraadaha lagu soo rogay inta lagu guda jiro aafada taas oo xaddiga xawaaraha laga yareeyay Yurub oo dhan
Waxaan kuu sheegeynaa kuwee ah barnaamijyada ugu fiican ee kaa caawin doona inaad daawato TV-ga bilaash, xitaa lacag-u-arag ama ppv TV, DTT, isboorti, filimaan iyo in ka badan!
Soo ogow codsi xasaasi ah oo aad uga fiican kan Netflix oo gebi ahaanba xor u ah inaad ku daawato filimada ugu fiican iyo taxanaha mobilkaaga ama TV-gaaga
Disney + waxay gaaraysaa 50 milyan oo qof
Waa run run in hordhaca Disney + uu abuuray yididdiilo badan oo Yurub ah. Mugga iyo tayada ...
Netflix hadda waxay siisaa xakameynta waalidka qoysaska, waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo
Netflix waxay go'aansatay inay sii deyso cusbooneysiinta xakameynta waalidnimo ee qoysaska. Maanta waxaan ku baraynaa inaad si buuxda u isticmaasho.
Netflix hadda waxay taageertaa Bixby, kaaliyaha Samsung
Netflix maanta waa hogaamiyaha baahinta adeegyada fiidiyowga, waax dhowaan ...
Amazon waxay ka shaqeyneysaa madal socodka ciyaarta si ay ula tartanto Stadia: waxaa loogu yeeri doonaa Project Tempo
Amazon waxay horumarinaysaa adeeg rukumo ah oo loogu talagalay ciyaaraha fiidiyowga ee daruuraha si ay ula macaamilaan Google's Stadia. Waxaa loogu yeeri doonaa Project Tempo.
Isku day Amazon Prime Video bilaash ah bil ah
Amazon Prime Video waxay bixisaa adeegeeda oo bilaash ah hal bil oo diiwaangelin fudud. Waad ku raaxeysan kartaa dhammaan waxyaabaha ay ka kooban tahay, filimada, taxanaha ...
Waxaan soo aruurineynaa kuwa kuhadlaya kuwa ugu fiican ee aad ka heli karto Amazon liiska si aad u kala doorato midka aad siineyso Maalinta Aabbaha.
Adeegyada qulqulka muusikada waxay dakhli badan uga helaan shirkadaha rikoodhka ka badan iibka dhijitaalka iyo jirka
Adeegyada qulqulka muusikada waxay noqdeen isha dakhliga ugu weyn ee shirkadaha rikoodhada
Spotify wuxuu gaaraa 125 milyan oo macaamiil ah
Tirada macaamiisha lacagta la siiyay ee loo yaqaan 'Spotify', ayaa istaagay 31 milyan bishii Diseembar 125, tirooyinka taas oo si fiican uga sarreysa inta ka hartay adeegyada muusikada ee socda.
Spotify Carruurta, oo muusig u siiya kuwa yaryar ee guriga ku jira
Spotify Kids ayaa timid, oo muusikada u shubaysa carruurta yaryar ee guriga ku jirta, hadda ka soo qaad koontadaada isticmaale hoosta shaandhada kormeerka.
Spotify wuxuu hayaa Boqorka Muusigga oo wata 113 Milyan oo Bixiyeyaal ah
Adeegga qulqulka muusikada ee Iswidishka Spotify ayaa dhaafey dhammaan filashooyinka kobaca ee ay qabeen rubuca saddexaad ee 2019, xitaa way dhaaftay kuwa falanqeeyayaasha
Waze horey ayey u taageertay barnaamij kale oo qulqulka muusikada ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taageerada iyo iswaafajinta udhaxeysa Waze iyo TIDAL oo si rasmi ah loo sameeyay waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku dhageysato muusikada barnaamijka marinka.
Netflix wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beddesho xawaaraha dib u soo celinta ee Android
Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee lagu soo bandhigi doono Netflix ee loogu talagalay Android kaas oo kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho xawaaraha dib u soo celinta maadada.
Netflix waxay ka bilaabi lahayd qorshaheeda mobilada dalal kale
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan qorshayaasha Netflix ee ay ku bilaabayaan qorshahan taleefannada casriga ah ee ay ku leeyihiin Hindiya suuqyada cusub natiijooyinkooda wanaagsan awgood
Google Stadia wuxuu imanayaa Android TV sanadka 2020
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha lagu mideynayo Google Stadia iyo TV-ga Android sannadka 2020, sida horayba loogu caddeeyay.
Liiska Cusbooneysiinta Netflix ee Telefoonada la wadaagi karo HDR10
Soo ogow liiska buuxa ee taleefannada Android ee la jaan qaadaya qaabka HDR10 ee Netflix sida ay shaaca ka qaadday shirkadda lafteeda.
Qalabka 'Spotify widget' ayaa soo laabtay isla markaana ah nooca ugu dambeeya
Qalabka cusub ee 'Spotify' wuxuu u oggolaanayaa habeyn kale oo kale wuxuuna la imaanayaa naqshad cusub oo loogu beddelo daqiiqadahaaga muusikada kuwa ugu fiican.
Google Play Music wuxuu isu diyaarinayaa inuu macsalaameeyo suuqa
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan suurtagalnimada in Google Play Music uu ku dhammaan doono macsalaameynta suuqa dhowr bilood gudahood si joogto ah.
Spotify waxay ka saareysaa wijetka si loo xakameeyo soo celinta muusikada kadib cusbooneysiintii ugu dambeysay
Cusboonaysiintii ugu dambaysay ee barnaamijka 'Spotify' ayaa joogsatay oo ay ku jiraan widget-ka si loo maareeyo muusigga shaashadda guriga.
Spotify ayaa laga yaabaa inay kor u qaado qiimaheeda wadamada qaarkood
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka Spotify si kor loogu qaado qiimaha qaar ka mid ah siciradooda suuqyada xulashada waxyar.
Amazon Prime Video wuxuu hadda la jaan qaadayaa Chromecast
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan iswaafajinta ka dhexeysa Amazon Prime Video iyo Chromecast oo ugu dambeyn si rasmi ah rasmi looga dhigay sida ay shirkaddu ku dhawaaqday.
Sidee looga daawadaa FC Barcelona VS Chelsea bilaash meelkasta oo aad adduunka ka joogto
Ma dooneysaa inaad ku aragto FC Barcelona VS Chelsea bilaash meel kasta oo aad adduunka ka joogto? Haddii jawaabta su'aashan ...
Netflix waxay suuqyada qaar ka bilaabi doontaa sicirkeeda kaliya ee mobilka
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshaha ku-qoritaanka ee Netflix ay ka bilaabeyso Hindiya oo loogu talagalay oo keliya taleefannada casriga ah ee imanaya waddanka bilahaan.
Ma mudan tahay in la soo dejiyo Spotify Lite?
Ka ogow wax badan oo ku saabsan isbarbardhigga u dhexeeya Spotify Lite iyo Spotify oo aad ku ogaan karto haddii ay mudan tahay inaad ku soo dejiso barnaamijkan cusub Android.
Ku raaxayso Amazon Music Unlimited muddo 4 bilood ah kaliya 1 euro
Amazon waxay na siisaa dalab 4-bilood ah oo ah Amazon Music Unlimited kaliya oo ah 0,99 euro.
Sida looga soo dejisto barnaamijka 'Podcasts' barnaamijka 'Spotify' taleefankaaga
Soo ogow talaabooyinka la raaco si aad u soo dejiso barnaamijka 'Spotify podcast' taleefankaaga Android oo aad u awoodo inaad dhageysato waqti kasta oo kale.
Plex for Android hadda waxay taageertaa shaqada PiP (Sawirka Sawirka)
Muuqaalka PiP (Sawirka Sawirka) ayaa hadda lagu heli karaa cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Plex.
Spotify ayaa kuu oggolaan doonta inaad muusig la wadaagto asxaabta oo aad isla markaa dhegeysato
Ogow wax badan oo ku saabsan shaqada noo oggolaan doonta inaan la wadaagno muusikada kooxaha asxaabta ah si fudud Spotify, oo horeyba ugu jirtay marxaladda tijaabada.
Netflix waxay cusbooneysiisaa liiska taleefannada gacanta ee ku habboon HD iyo HDR
Ka ogow wax badan oo ku saabsan liiska la cusbooneysiiyay ee taleefannada Android ee la jaan qaada HD iyo HDR ee barnaamijka Netflix ee Android.
Spotify wuxuu tijaabiyaa aqoonsiga codka barnaamijka
Ka ogow wax badan oo ku saabsan tijaabooyinka ugu horreeya ee Spotify oo leh aqoonsi hadal oo lagu soo bandhigi doono barnaamijkaaga bilo yar gudahood.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan adeegga ciyaarta daruuraha ee Samsung ay si rasmi ah u bilaabi karto sannadkan, sida ay tilmaameen warbaahinta kala duwan.
Spotify waxay horeyba u heysatey 100 milyan oo macaamiil ah oo ku baahsan adduunka
Adeegga muusikada ee qulqulka 'Spotify' ayaa hadda gaadhay 100 milyan oo macaamiil oo bixiya adduunka oo dhan.
Sida loo Daaro Maqalka iyo Video-ga inta udhaxeysa Qalabka Android
Video-post kaas oo aan si faahfaahsan ugu sharxayo habka ugu wanaagsan ee loo sii deyn karo maqalka iyo muuqaalka u dhexeeya qalabka Android.
Maxay yihiin Shixnadaha Spotify maxaase loogu talagalay?
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan 'Spotify Canvases', waxa ay yihiin, sida ay u shaqeeyaan iyo sida aad uga joojin karto barnaamijka.
Netflix waxay tijaabisaa rukummada toddobaadlaha ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshooyinka lacag bixinta ee cusub ee Netflix, kuwaas oo tijaabinaya liis garayn toddobaadle ah oo Hindiya ka dhacaya dhowaan.
Beddelka ugu fiican ee Diskokosmiko
Soo hel bedelka ugu wanaagsan ee Diskokosmiko oo aad si fudud ugu soo dejiso ama u soo dejiso dhammaan noocyada noocyada ah.
Spotify ayaa dhawaan kuu oggolaan doonta inaad ku xannibto fanaaniinta muuqaal cusub
Badhanka qufulku waa muuqaal ay si aad ah u codsadeen dadka isticmaala Spotify, taas oo kuu oggolaan doonta inaad xirto muusikada farshaxanka. Tani waa weli soo socota.
Sida loo rakibo Stingray Music, oo ah bedel aad u wanaagsan oo loo yaqaan 'Spotify', bilaash iyo xayeysiis la'aan
Tababarka fiidiyowga ee aan ku tusayo sida loo rakibo Stingray Music, oo lagu beddelan karo Spotify bilaash iyo bilaa xayeysiis aan laga heli karin dhulka Isbaanishka
Kani waa barnaamijka ugufiican ee waqtigaan lagu dhageysto muusikada qulqulka ama lagu soo dajiyo
App aad u xiiso badan oo noo oggolaan doona inaan dhageysano muusikada qulqulka iyo soo dejinta, dhammaantoodna si fudud oo muuqaal ah oo adeegsade ah.
Mashruuca Atlas, Mashruuca dariiqa EA ee loogu talagalay ciyaaraha moobiilka
EA waxay ka shaqeyneysaa Mashruuca Atlas, oo ah madal ciyaaraha lagu ciyaaro oo noo oggolaan doonta inaan ku isticmaalno seddex kulan oo AAA ah qalabka aan lahayn ilo badan.
[APK] MegaDeDe, waxaan ku tusineynaa sida loo helo beddelka dhabta ah ee loo yaqaan 'PlusDeDe'
Ciyaaryahan muusig oo cajaa'ib leh oo qaab offline ah oo bilaash ah
Ciyaaryahan muusig maxalli ah oo cajiib ah iyo geeyo gebi ahaanba bilaash ah
Ciyaaryahan muusig maxalli ah oo si xarago leh u socodsiinaya oo afkaaga uga tagi doona wax kasta oo ay na siiso, sababtoo ah isku xirnaantiisa qabow iyo sababta oo ah waxaan u dhoofin karnaa liistadayada YouTube-ka si aan kaliya u dhageysano codka xitaa iyadoo shaashadda la saaray.
Adeegga qulqulka muusikada Tidal ayaa lagu eedeeyay inuu been abuur ku sameeyay xogta
Adeegga muusikada ee qulqulka 'Tidal' wuxuu wajahayaa dhibaatooyin taxane ah qaar ka mid ah fannaaniinteeda, sababo la xiriira tirooyinka taranka ee la saadaalinayo inay sicir barar yihiin
Telegram 4.8 ayaa la yimid warar sida qulqulka
Telegram 4.8 waxaa lagu soo bandhigayaa dhowr war oo muhiim ah. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta arjiga farriinta ee naga tagaya warar kala duwan.
Google waxay ku dhawaaqeysaa YouTube TV, barnaamijkeeda cusub ee TV-ga
Google ayaa ku dhawaaqday YouTube TV adeegyadeeda telefishanka ee $ 35 bishiiba oo ka bilaabanaya Mareykanka dhammaadka 2017
Waxaan ku tusineynaa afarta barnaamij ee ugufiican si aad udhageysato muusikada qulqulka ah
OS waxaan tusnaa oo waji u wajahnaa afarta barnaamij ee ugufiican si aan u dhagaysto muusikada qulqulka, laba ikhtiyaar dhageysi oo bilaash ah iyo laba lacag bixin.
[APK] Codsiga ugufiican ee waqtigaan ah ee TV-ga loogu daawan karo bilaash
Shaki la'aan tani waa apk-ka ugu fiican xilligan si aad u daawato TV-ga bilaashka ah, haddii ay yihiin kanaallo furan, kuwa lacag-bixinta iyo xitaa kanaalada dadka waaweyn.
Prince waxaa hadda laga heli karaa Google Play Music iyo adeegyada kale ee socodka
Sidii horeyba loo sii isla dhexmarayay usbuucii la soo dhaafay, inta badan buug-yaraha heesaha dhintay ...
Facebook wuxuu ka shaqeynayaa barnaamij cusub oo loogu talagalay soo dejinta barnaamijyada
Facebook wuxuu doonayaa inuu la tartamo fiidiyowga waaweyn iyo barnaamijyada qulqulka leh oo leh barnaamij cusub oo diiradda lagu saarayo 10-daqiiqo oo TV-ga u eg
Plex waxay qorsheyneysaa inay ku darto adeega warka baahinta fiidiyoowga adoo helaya ilaalin
La soo wareegitaankan, Plex wuxuu ku biirayaa adeegga fiidiyowga ee fiidiyoowga ah ee ay bixiso Watchup muddo dheer. Lahaansho
Hadda waxaad toos ugala socon kartaa Twitter la'aan Periscope
Twitter ayaa hada la cusbooneysiiyay si aad toos ugula socon karto adigoon haysan barnaamijka Periscope. Cusboonaysiin weyn oo loogu talagalay barnaamijka.
WhatsApp wuxuu si tijaabo ah ugu tijaabiyaa socodka fiidiyowga
WhatsApp waxay tijaabineysaa muuqaal fiidiyoow ah oo tijaabo ah oo ku saabsan Hindiya si markaa fiidiyowyo badan loogu soo dejiyo xusuusta taleefanka.
Sida loogu daawado kubada cagta bilaash iyo dhamaan kanaalada TV-yada ee Spain IT SHAQO !!
Maanta waxaan ku tusineynaa dalabka ugufiican ee si bilaash ah loogu daawado kubada cagta, codsi si fiican u shaqeeya xitaa wuxuu noo ogolaanayaa inaan si bilaash ah u daawanno kanaalka lagu daro.
Raac toos u socodka munaasabadda Google iyadoo la soo bandhigayo Google Pixel iyo waxyaabo kaloo badan
Dhacdada Google waxay bilaabmi doontaa 18: 00 pm (waqtiga Isbaanishka) oo lagu soo bandhigi doono dhowr waxyaalood oo xiiso weyn leh.
Hadda waxaad ka sii dejisan kartaa barnaamijyada Android ee Facebook Live oo leh Bluestacks
BlueStacks waxay ku dartay xirmooyin qalab ah oo u oggolaanaya barnaamijyada Android ee Facebook Live. Cusboonaysiin weyn oo loogu talagalay qulquliyeyaasha.
Adeegga qulqulka muusikada ee Amazon ayaa ku kici kara $ 5 bishii isticmaalayaasha Echo
Amazon waxay dooneysaa inay gasho suuqa adag ee muusigga lagu faafiyo qalabkeeda Echo iyo bixinta bil kasta $ 5 si loo helo muusikada ugu fiican.
App-ka YouTube-ka ayaa dhawaan soo bandhigi doona suurtagalnimada in si toos ah loo daayo
YouTube wuxuu ku boodayaa tareenka qulqulka waqtiga dhabta ah dhawaana waad awoodi doontaa inaad baahiso si fiidiyowga soo baxa loogu keydiyo akoonkaaga.
Sida loo isticmaalo Kodi, ciyaaryahanka ugu dhameystiran ee warbaahinta Android
Tababarkan ku saabsan Kodi waxaad ku ogaan doontaa dhammaan sirta si aad uga faa'iideysato fursadaha ugu wanaagsan ee ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee Android multimedia
Tumblr wuxuu isku diyaarinayaa inuu bixiyo fiidiyoow toos ah oo fiidiyoow ah
Tumblr waa adeeg kale oo ku daraya isbeddelka hadda jira oo macnaheedu yahay in fiidiyoow lagu duubo waqtiga dhabta ah oo aan ku aragnay Periscope
Amazon waxay diyaar u tahay inay soo bandhigto adeegyadeeda baahinta muusikada khadka tooska ah
Amazon waxay ku dhowdahay inay diyaar u tahay adeegyadeeda baahinta muusikada khadka tooska ah, oo imaan doonta dhammaadka xagaaga ama horraanta deyrta.
Periscope horeyba wuu u kaydiyaa durdurradaada weligiis
Periscope wuxuu u ogolaanayaa laga bilaabo maanta inuu si otomaatig ah ugu keydiyo koontadaada dhamaan baahinta aad weligaa sameyso.
Facebook Live wuxuu helaa 24-saac oo dhab ah oo toos ah
Facebook Live wuxuu la midoobi doonaa 24-saac oo toos ah oo toos ah toddobaadyada soo socda taasna waxay lahaan doontaa waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Periscope ayaa dhawaan heli doonta raadinta barnaamijyada baahinta iyo socodka diyaaradaha
Periscope waxaa ku jiri doona astaamo cusub oo cusub oo cusbooneysiin weyn ah oo ay ku jiri doonaan raadinta baahinta iyo awoodda loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loogu talagalay soo dejinta.
Periscope hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad keydiso fiidiyowyadaada qulqulka ah
Fiidiyowyada lagu abuurayo waqtiga dhabta ah Periscope waa la keydin karaa iyada oo ikhtiyaar u ah abuureha nuxurka leh.
Ciyaaraha YouTube-ka waxaa lagu cusbooneysiiyay tab tab ah oo loo qoondeeyay, pop-up video player iyo inbadan
Ciyaaraha YouTube-ka waxaa lagu cusbooneysiiyay taxane cusub oo astaamo ah oo lagu xisaabtamayo sida fiidiyowga ciyaarta dul sabeynaya iyo waxyaabo kale oo badan
Kamcord ugu dambeyntii wuxuu bixiyaa hab loogu talagalay qulqulka si uu lacag u helo
Kamcord wuxuu la yimid waddo wabiyaal si ay lacag uga helaan tabarucaadka taageerayaashooda.
Raadiye Dijital ah oo la soo dhoofiyay waa mid ka mid ah adeegyadii ugu dambeeyay ee heesaha elektaroonigga ah
Raadiye Dijital ah oo la soo dhoofiyay waa barnaamij gaar ah oo loogu talagalay soo dejinta muusikada elektarooniga ah ee leh isku xirnaan weyn iyo in ka badan 90 kanaal
Barnaamijka muusigga qulqulka ee SomaFM wuxuu noqonayaa mid bilaash ah
SomaFM waa adeegga elektaroonigga iyo indie ee muusigga oo noqday barnaamijkeeda bilaashka ah ee 'Android'
Kaamirada GoPro waxay hadda la midoobeysaa Periscope si toos ah loogu tabinayo
GoPro wuxuu dhibco wanaagsan ka helayaa isagoo ku dhawaaqaya taageerada Periscope, in kasta oo aan weli sugi doonno inay ku timaaddo Android
Spotify diyaar u ah inuu soo bandhigo fiidiyowga iyo boodhadhka barnaamijka 'Android'
Spotify waxay rabtaa inay isku darsato adeegyo dheeri ah iyo soo saarista Spotify Haddaba si ay u keento fiidiyow iyo boodhadh malaayiin isticmaaleyaal ah
Kamcord wuxuu hadda u oggolaanayaa dhammaan isticmaaleyaasha Android inay ka soo socdaan taleefannadooda gacanta waqtiga dhabta ah
Kamcord ee cusbooneysiinta cusubi waxay u oggolaaneysaa isticmaale kasta inuu isticmaalo moobilkiisa si uu u sii wado cayaarahooda waqtiga dhabta ah.
Facebook wuxuu fiiriyaa Periscope wuxuuna bilaabayaa fiidiyoow si toos ah ugu socda shabakadiisa bulshada
Facebook wuxuu u jeestay Periscope si uu u soo bandhigo muuqaalkiisa weyn, sida fiidiyoowga waqtiga dhabta ah, shabakadiisa bulshada.
Opera Max sidoo kale way keydin doontaa xogta markaad isticmaaleyso barnaamijyada qulqulka muusikada sida YouTube Music
Dhiirrigelinta xogta ayaa kuu oggolaan doonta inaad keydiso 50% kuwa ay ku baaba'aan barnaamijyada muusikada sida YouTube Music oo horeyba loogu heli jiray Opera Max
[APK] Ciyaaraha Cayaaruhu waxay isu diyaariyaan in lagu daro duubista shaashadda iyo qulqulka YouTube Gaming
Barnaamijka Ciyaaraha Google wuxuu umuuqdaa midda lagu maareeyo qulqulka ciyaaraha si aad awood ugu yeelatid inaad hadhow ka daawatid YouTube Gaming.
Periscope wuxuu helaa taageero sifeyn ah waqtiga dhabta ah qaab muuqaal ah
Periscope wuxuu soo bandhigay awooda lagu baahin karo fiidiyowga qaab jiif ah taas oo suurtagal ka dhigeysa in la isticmaalo ikhtiyaarkan ama waxa uu noqon karo midka toosan.
Shaashadda Tooska ah ee Tooska ah, barnaamijka Sony si loogu sii daayo cayaarahaaga Twitch iyo YouTube
Twitch ama YouTube waa labada barxadood ee aad si toos ah uga daawan karto ciyaaraha qulqulka laga sameeyay Live Screen Streaming.
AC / DC hadda waxaa laga heli karaa adeegyada hoorinta muusikada sida Play Music iyo Spotify
AC / DC waxay ku degtaa dhowr adeegyo heeso muusig ah, oo ay ku jiraan Play Music iyo Spotify. Dhacdo muusig ah
Sida loo raaco tooska shirkii furitaanka ee Google I / O 2015 oo soconaya 18,30 pm (waqtiga Isbaanishka)
Hoos waxaan kuugu siineynaa helitaanka tooska ah ee furaha aasaasiga ah ee Google I / O 2015 ee Streaming.
MixRadio, oo ah adeegga qulqulka muusikada ee caanka ah ee hadda laga heli karo Play Store
MixRadio hadda waxaa laga heli karaa Play Store si looga helo muusikada ugu fiican adeeggan socodka
3 codsi oo aad ugu raaxeysaneyso qulqulka muusikada ee Android
Haddii aad rabto inaad ku raaxeysato muusigga Android adigoon wax kala soo degsan karin bartaada, maanta waxaan soo jeedineynaa seddex barnaamij oo aad ugu raaxeysan karto socodka
Tilmaamaha saxda ah ee loogu talagalay qulqulka filimada iyo taxanaha kombuyuutarka illaa Android
Waxaan ku tusineynaa sida loo sii qulquliyo waxyaabo badan oo badan oo ka socda kombuyuutarka PC ilaa Android 5 daqiiqo gudahood
Sida loo qulquliyo muusikada qalabka Android?
Haddii aad waligaa isweydiisay sida ugu badan ee looga faa’iideysan karo terminal-kaaga Android iyo muusigga, maanta waxaan kuu sharraxayaa sida loo dhageysto qulqulka muusikada qalabka Android.
Codsiga qulqulka AllCast hadda waxaa laga heli karaa Play Store
Koush wuxuu sii daayay AllCast Play Store. Codsiga qulqulka ayaa ka baxsan beta waxaana hadda loo heli karaa soo dejin.
Google Drive hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto fiidiyow adoo adeegsanaya qulqulka
Adeegga keydinta daruuraha Google Drive ayaa la cusbooneysiiyay oo hadda wuxuu ku ciyaarayaa fiidiyoow iyada oo loo marayo qulqulka
Play.fm waxay u timaadaa Android iyadoo la socota codsi loo maqli karo
Hadda waa markiisa in laga hadlo barnaamijka Android ee bogga Play.fm, oo isla qaabkan loo magacaabay, kaas oo horeyba looga heli jiray Suuqa Android si loo soo dejiyo